Windows Kan sameeyey Movie Alternative
> Resource > bedelan karo > Windows Kan sameeyey Movie Alternative: ka fiican yahay Windows Movie Kan sameeyey,
Windows Movie Uumahaaga software ah software iyo samaynta filim video tafatirka lacag la'aan ah dadka isticmaala PC. Laakiin hawlaha waa xadidan oo inta badan bidbidayaan, si dad badan oo aadan rabin in aad u isticmaasho oo aad rabto inaad ka heli Windows kale oo ah Kan sameeyey Movie taas oo aad uga wanaagsan Windows Movie abuuray.
Haddii aad sidoo kale raadinaya duwan Windows Movie abuuray, Oo aad u yimaadeen inay meel sax ah. Halkan waxaan ku talinaynaa in laba kale oo Kan sameeyey Windows Movie idiin - Fantashow iyo DVD Slideshow Builder Deluxe . Labada ka mid ah laba barnaamij oo si buuxda u la Windows Vista, Windows 7 iyo Windows 8. lihin Halkan aynu arki qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee labadan kale oo kii iyaga uumay Movie Windows siday u kala horreeyaan,
Qeybta 1: Features Key ee Fantashow
Qeybta 2: Features Key ee DVD Muqaal dhise
Fantashow bixisaa madadaalo ah, hab fudud oo heer sare si aad u-abuur noqon photos, video clips, songs jecel, voiceovers iyo Sheeko in masterpieces.
1 ilkaheeda ka ilaali Your Memories- Big ama Small
La wadaag dhalashadiisa, fasax iyo daqiiqado maalin kasta iyada oo la samaynaayo filimada shakhsi la Fantashow. 200+ Hababka movie free munaasabadaha kala duwan ayaa laga heli karaa. Ma waxay noqon lahayd fiican si loo eego filimada aad mar kale ka buuxsamay xusuus qaali ah oo aad u hesho dareen la mid ah oo xiiso leh, farax iyo jacayl?
2 Fantastic Home Movie sameeyey Easy
Iyadoo qasabno oo kaliya dhowr iyo male, Fantashow kaa caawinaysaa in aad la abuuro movie guriga fantastik ah in loo idmo waqti lahayn. Kaliya dooro style a movie cajiib ah oo jiidi-n-jeedi photos, video iyo music, xusuusta aad loo badali doonaa filimada Hollywood-style.
3 Share Your Movies ee Tayada Sare
Ka dib markii aad curiyay cusub, waxaa la wadaagto saaxiibadaa iyo qoyskaaga goobtii. Si toos ah geliyaan muujinaya si aad u YouTube iyo Facebook, gubi in DVD ama la wadaagto kale Fantashow isticmaala in Fantashow Zone- aad dooratay oo dhan!
Baadh this Windows Movie kale Kan sameeyey hadda >>
DVD Slideshow Builder Deluxe waa kii an slideshow dhan-in-mid. Haddii aad rabto in la abuuro a video slideshow casri ah, oo aad ka raalli noqon doonaa waxa la.
1 Your Photos & Videos, Your Movie Story
Mar walba waxaa jira waqtiyo gaar ah oo aad rabto in aad ku qarisaan naftiina ee Meyeydaan. Si fudud u jiidi oo hoos u photos & video clips si fudud sameeyo filimada DVD in ay sii xasuus nool ah. Waa maxay ka badan, waxaa jira xaddidaadda tirada photos lahayn. Just dari badan intii aad jeceshahay!
2 Show-n-sheeg Story ee Hollywood-sida Styles Movie
480+ Hababka movie free dhalaalayay goobtii aad sawiro weli u soo nooleeya. 3D Style Pack A waa weyn yahay ee hadda la heli karo! Samee filimada in jiito qof kasta oo isticmaalaya Hababka movie in kaliya hal click. Samaynta filim Photo waa kaliya si sahlan oo cajiib ah. Baadh Hababka moive free >>
3 Retouch Your Movie Story
Taabo oo dhan ku jira sheekada filimka. Ku dar mooshin in photos & videos la kala guurka 2D / 3D iyo saamaynta Pan / Zoom, xaalkaa ku jira si gaar ah qalab music / video tafatir, iyo 150+ bedeley DVD mowduuc sida fasax, arooska, jacaylka & guuradii samaynaysaa menu qoraalka fudud badan abid ee slideshow ah samaynta software.
4 Share Story on TV, Web & Qalabka
Ilaali sheekadaada oo qaybsada meel kasta. Ku raaxayso muujinaya on TV shaashad weyn oo isticmaalaya ciyaaryahan kasta DVD by guba gal DVD. Waxa kale oo aad la wadaagto sheekooyin laga yaabaa on YouTube, Facebook, iyo On-u-ku tag. Si toos ah uoload videos in YouTube hadda taageeray!
Windows Kan sameeyey Movie u Mac - Samaynta Fantastic Movies
8 Casharrada Kan sameeyey Windows Movie on YouTube waa inay dhowrtaa
Top 4 lagu bedelan karo doubleTwist u Mac iyo PC
Smart Converter Pro Alternative: wejiyo iyo sida dhaqsaha badan Video Converter
Smart Converter Alternative Pro for Windows: More Advanced, si dhakhso ah oo sahlan
Qof kasta oo lagu talinayo Boilsoft Alternative?
Qof kasta oo lagu talinayo ClipWrap Alternative?